सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेट प्रेमीलाई खुसीको खबर सन्दीप अब आइपिएलमा ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»खेलकुद»सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेट प्रेमीलाई खुसीको खबर सन्दीप अब आइपिएलमा !
सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेट प्रेमीलाई खुसीको खबर सन्दीप अब आइपिएलमा !
By दिपेश बिष्ट on १४ माघ २०७४, आईतवार ०८:२५ खेलकुद
माघ १४, काठमाडौँ। नेपाली युवा क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेले इण्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट (आईपीएल)को एघारौँ संस्करण खेल्ने भएका छन् । भारतको बैङ्गलोरमा भएको अक्सनको दोश्रो दिनमा सन्दीपलाई दिल्ली डेयरडेभिल्सले किनेको हो । दिल्लीले नेपाली खेलाडी सन्दीपलाई २० लाखमा किनेको हो ।
आईपीएलले अक्सनका लागि जारी गरिएको खेलाडीहरुको सुचिमा ३६० भारतीयसहित ५७८ खेलाडी रहेका छन्, जसमा २७६ नम्बरमा नेपाली खेलाडी सन्दिपको नाम परेको थियो । एशोसिएट देशबाट परेका उनले न्यूनमत मूल्य २० लाख भारु ताकिएको थियो ।
विगतमा माइकल क्लार्कको सहयोगमा अष्ट्रेलियामा समेत खेलिसकेका कारण सन्दीपले अन्तर्रा्िष्ट्रय एक्सपोजर पाएका हुन् । अक्सनमा आइपिएल टिमले सन्दीपलाई बोलि लगाएमा उनि आइपिएल खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी हुनेछन् ।